Utshintsho kwiMedicare ngo-2020: Into ekufuneka uyazi malunga neMedicare kulo nyaka - Inkampani | Eyenkanga 2021
Impilo-Ntle Impilo Iziyobisi Vs. Umhlobo Izilwanyana Zasekhaya Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Cinezela Ukuphuma Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Imidlalo Ulwazi Lweziyobisi Iindaba, Impilo Imfundo Yezempilo, Iindaba Inkampani, Imfundo Yezempilo Inkampani, Ukuphuma
Eyona >> Inkampani >> Yintoni omele uyazi malunga neenguqu ze-Medicare kulo nyaka
Yintoni omele uyazi malunga neenguqu ze-Medicare kulo nyaka
I-Medicare yinkqubo ye-inshurensi yezempilo exhaswa ngurhulumente kwabo bantu baneminyaka engama-65 nangaphezulu, kunye nabantu abadala abangaphantsi kweminyaka engama-65 abakhubazekileyo. Uqikelelo Iipesenti ezili-15 zabantu baseMelika ukuthatha inxaxheba kwi-Medicare. Ngaphandle kwabantu abaninzi abane-Medicare, kusenokuba nzima ukuqonda. Akuncedi ukuba ezinye izinto zenkqubo zihlala zitshintsha unyaka nonyaka. Nazi iinguqu zika-2020 zeMedare ekufuneka uyazi ngazo.
Utshintsho kwiMedicare ka-2020
Kulo nyaka iipremiyamu zanyanga zonke ziyenyuka kubaxhamli abaninzi beMedicare, kwabanye baya kunyuka baye kwi-7%. Amaziko eMedicare kunye neeNkonzo zeMedicaid , okanye i-CMS, ichaze oku kuqiqa ngasemva kwayo: Ukwanda kweprimiyamu zeCandelo B kunye nokuncitshiswa ikakhulu kubangelwe kukunyuka kwenkcitho kumachiza alawulwa ngugqirha. Ezi ndleko ziphezulu zineziphumo ezibi kwaye zikhokelela kwiiprimiyamu eziphezulu zeCandelo B kunye nokuncitshiswa.
Nalu uqaqambiso lolunye utshintsho olukhulu ngo-2020:
Amayeza e-Medicare Icandelo A kunye ne-Part B (kwabo bawahlawulayo) aphezulu kwi-2020.
I-Medigap (okanye i-Medicare Supplemental Insurance) yesiCwangciso C kunye noCwangciso F azisabonelelwa kwabo basandula ukufumana ilungelo lokufumana iMedicare ngo-2020.
Izibiyeli zengeniso zeepremiyamu ezinengeniso ephezulu ziye zahlengahlengiswa kwiCandelo B le-Medicare Icandelo D . Ezi zibiyeli ziya kuchaphazela malunga ne-7% yabo bafumana iMedare. Ukubona ukuba iyakuchaphazela, kukho itshathi ekhoyo kwiwebhusayithi yeCMS Apha .
I-Medicare ivala isithuba sokugubungela iCandelo D, okanye umngxuma wedonathi .
Udidi olutsha lwesicwangciso seMedigap lwaziswa, isiCwangciso G, isicwangciso seinshurensi esongezelelekileyo. Esi sicwangciso sitsha songezelelekileyo silungile kwabo kunqabile ukuba bafune ukutyelela ugqirha. Kwesi sicwangciso, hlawula iindleko zakho zokuphuma epokothweni de ubethe i-deductible ye- $ 2,340. Emva koku, isicwangciso sakho se-inshurensi yokuxhasa siza kukuhlawula ezinye iindleko zokhathalelo lwempilo ezingafakwanga yiMedicare
Ukuhlaziywa Isixhobo soFumana isiCwangciso seMedare iyenziwa.
Ixabisa ntoni iyeza kwi-2020?
Nalu ulwahlulo lweendleko zolu tshintsho:
Icandelo A: Inxalenye ye-Medicare Part A premium, yabo bangakulungelanga ukungenelwa kwiCandelo A, iya kuvela kwi-252-458 ngenyanga ngenyanga kuxhomekeke kwimbali yomsebenzi. Oku kuthelekiswa nenqanaba le-2019 le- $ 240- $ 437. Iindleko ezitsalwayo yi- $ 1,408 ngexesha ngalinye lesibonelelo.
Icandelo B: I-premium ye-Medicare Part B kunye ne-Medicare Part B deductible zombini zikhula ngo-2020.
Ipremiyamu ngoku iya kuba yi- $ 144.60 endaweni ye- $ 135.50.
Ukuxhuzulwa kunyuka kuye kwi-198 yeedola.
Icandelo C: Olunye utshintsho oluqinisekileyo ngo-2020 kukuba iipremiyamu zesicwangciso seMedare esiSebenzayo kufuneka zehle ngomndilili 2. 3% ukusuka kumaxabiso e2018. Le iya kuba yeyona iphantsi kwezi premiums bezikwiminyaka engaphezu kwe-13.
Icandelo D: Ukunciphisa isithuba sokugubungela i-Medicare-ekwabizwa ngokuba sisiCandelo D sokucwangcisa umngxunya-umamkeli ngoku kufuneka ahlawule kuphela iipesenti ezingama-25 zeendleko zamachiza amiselweyo emva kwexesha lokugubungela iCandelo D. Ngaphambili, kumngxunya wokunikela, i-Medicare yagubungela ama-56% kuphela kwaye umntu ngamnye wagubungela i-44% eseleyo. Iimali-mali ziqikelelwa ukuba ziqale kwi- $ 30 ye-Medicare Icandelo D, eya kuba yeyona iphantsi ukusukela ngo-2013.
Ngaba lukhona olunye utshintsho oluzayo kwiMedare?
Lonke olu lutshintsho olulindelekileyo kwi-Medicare ngo-2020; Nangona kunjalo, kunokwenzeka kakhulu ukuba kuya kubakho utshintsho ngakumbi kule minyaka imbalwa izayo. Kukho izinto ezongeziweyo kwi-Medicare ngenxa ye-coronavirus, kubandakanya iimvavanyo zaselebhu zasimahla ze-COVID-19 kunye nokwandisa okwethutyana intlawulo yeMedare Iinkonzo zononophelo lwempilo .
Ukujonga ukuba uyakulungela na ukufumana unyango okanye ukufumanisa ukuba nini ukubhalisa okuvulekileyo kwenzeka, i-SingleCare inamanqaku amaninzi aluncedo. Unokusebenzisa Unonophelo olulodwa kunye neMedicare ukunceda ukugcina okungakumbi kugonyo lwamachiza amiselweyo, nokuba ligama lophawu okanye amayeza enziwe afana nalawo enziwe ngumenzi - kodwa awunakho ukuzisebenzisa kunye. Unokufuna ukusebenzisa i-SingleCare ukuba amaxabiso ethu aphantsi kunexabiso leMedare; Nangona kunjalo, ezo ndleko aziyi kubalelwa ekutsalweni kwakho.
FUNDA OKULANDELAYO: Utshintsho lweMedicaid ngo-2020
Leliphi elona yeza lifanelekileyo lomkhuhlane?
I-Sudafed vs. Mucinex: Umahluko, ukufana kwaye yeyiphi engcono kuwe
utye ntoni ukuze unqande ukubanda
Ngaba isicatshulwa solawulo lokuzalwa senza ukuba utyebe
Ungayifumana njani iaderall emiselweyo ngaphandle kweinshurensi
ibuprofen kakhulu embi kuwe
ingqele ihlala ihleli ixesha elingakanani